सरकारी कर्मचारीको सबै प्रकारका भत्ता खारेज – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१९ असार २०७७, शुक्रबार ११:०३ English
सरकारी कर्मचारीको सबै प्रकारका भत्ता खारेज
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले कर्मचारीको सबै प्रकारको भत्ता खारेज गरेको छ। कोरोना रोकथामको लागि अग्रपंतिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवकबाहेक अरूलाई प्रदान हुने भत्ता खारेज गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजानिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा भत्ता लगायत सबै प्रकारका भत्ताहरू २०७७ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरि खारेज गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
त्यस्तै मन्त्री खतिवडाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर, नयाँ सवारी खरिदमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १८:३९ मा प्रकाशित
बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था गर्न माग	१९ असार २०७७, शुक्रबार ०९:४३